တောင်ကိုရီးယားမှာ ဒုတိယ လူကြည့်အများဆုံး ဖြစ်လာတဲ့ 'Along With the Gods' ရုပ်ရှင် - Yangon Media Group
တောင်ကိုရီးယားမှာ ဒုတိယ လူကြည့်အများဆုံး ဖြစ်လာတဲ့ ‘Along With the Gods’ ရုပ်ရှင်
သရုပ်ဆောင်ရန်အောင် နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း
ဆိုးလ်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၉
စိတ်ကူးယဉ် ဒရာမာရုပ်ရှင်ဖြစ်သော “Along With the Gods: The Two Worlds” ရုပ်ရှင်သည် တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံတွင် ဒုတိယလူကြည့်အ များဆုံး ရုပ်ရှင်ဖြစ်လာခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ ကိုရီးယားရုပ်ရှင်ကောင်စီမှ ထုတ် ပြန်သော ရုံဝင်ငွေစာရင်းအရ ပရိသတ်များအကြား လူကြိုက်များခဲ့သော ယင်းရုပ်ရှင်သည် ရုံတင်ပြသအပြီး ၅၁ ရက်မြောက်ဖြစ်သော ဖေဖော်ဝါရီ ၈ ရက် ညနေ ၆ နာရီတွင် စုစုပေါင်း လာရောက်ကြည့်ရှုသူ ၁၄၂၅၉၃၉၄ ဦးအထိ ရောက်ရှိခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။
ယင်းရုပ်ရှင်သည် ၂ဝ၁၁ ခုနှစ်တွင် ပရိသတ် ၁၂၂၅၇၁၁၅ ဦး ကြည့်ရှုခဲ့သော “Ode to My Father” ထက် ကျော်လွန်သွားခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံတွင် ပရိသတ် ၁ဝ သန်းကျော် ကြည့်ရှုသည့် ရုပ်ရှင်များကို ရုံဝင်ငွေ အောင်မြင်မှုရရှိသည့် ရုပ်ရှင်ဟုသတ်မှတ်သည်။ တောင်ကိုရီးယားရုပ်ရှင်သမိုင်း တွင် လူကြည့်အများဆုံးရုပ်ရှင်မှာ ကြည့်ရှုသူ ၁၇ ဒသမ ၆၁ သန်းရရှိခဲ့သော “Roaring Currents” ရုပ်ရှင်ဖြစ်သည်။
ဒီဇင်ဘာ ၂ဝ တွင် စတင်ရုံတင်ပြသခဲ့သော ဓဗူသညါ “Along With the Gods” ရုပ်ရှင်သည် ဒါရိုက်တာကင်ယုန်ဟွာ ရိုက်ကူးသော အပိုင်းနှစ်ပိုင်းမှ ပထမအပိုင်းဖြစ်ပြီး ဂျူဟိုမင်ရေးသားသည့် နာမည်ကျော် Webtoon ကို အခြေခံထားသည်။ ဟာဂျောင်ဝူး၊ ဂျူဂျီဟွန်းနှင့် ကင်ဟန်ဂီတို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော ယင်းရုပ်ရှင်သည် မသေခင် ကောင်းမှုကုသိုလ်များကိုသာ ပြုလုပ်ခဲ့သည့် မီးသတ်သမားတစ်ဦး သေလွန်ပြီးနောက် ၄၉ ရက်အတွင်း ငရဲ၌ သေမင်းသုံးဦး၏ လမ်းပြမှုဖြင့် ဖြတ်သန်းရသည့် အတွေ့အကြုံများကို ဇာတ်အိမ်တည် ရိုက်ကူးထားသည်။ ဒုတိယအပိုင်းကို ယခုနှစ် နွေရာသီတွင်ပြသရန် စီစဉ်ထားသည်။
မကွေး တိုင်းဒေသကြီး အတွင်း တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် တိုင်းဒေသြ??
ကိုရီးယား မင်းသား ဂျန်ဆော့ဝန် မူးယစ်ဆေး သုံးစွဲမှုဖြင့် ဖမ်းဆီးခံရ
တေးရေး မြင့်မိုးအောင်နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း
မြန်မာကိုယ်ပိုင်သံစဉ်တေးသီချင်းကိုးပုဒ်ကို တီးခတ်ထားသည့် စန္ဒရားတီးလုံးအခွေ စက်တင်ဘာတွင် ထွက်ရှိမည်
မုန်တိုင်းသင့် ဖိလစ်ပိုင်ပြည်နယ်တွင် မြေပြိုမှုများကြောင့် လူ ၂၆ ဦးသေဆုံး
ဦးကိုနီ လုပ်ကြံခံရမှုတွင် မှားယွင်း အပြစ်ပေး မခံရရေး ကူညီဆောင်ရွက်ပေးရန် လူ့အခွင့် အရေးကေ??
မန္တလေး-ပြင်ဦးလွင်အတက်လမ်း မိုင်တိုင်(၁၆/၄)မှ (၁၇/၂)အထိနေရာကို လမ်းစီမံကိန်း ပြီးစီးပါက နှစ်လ
၂ဝ၂ဝ အမေရိကန်သမ္မတ ရွေးကောက်ပွဲ အိုဟိုင်းအိုးပြည်နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဟောင်း John Kasich ရီပတ်ဘလီက
ကမ္ဘာ့ဖလားနှင့် မိသားစုကိစ္စ အကြား ဗျာများရဖွယ် ရှိနေသော ဖာဘီယန်ဒဲလ်
ရန်ကုန်- နေပြည်တော် – မန္တလေး အမြန်လမ်း မိုင် ၄ဝ ခန့်အား နိုင်ငံတကာ အဆင့်မီအမြန်လမ်း အဖြစ် ပထမ??
”တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ပရိသတ် လက်ခံလာအောင် သိလာအောင် ကြိုးစားနေပါတယ်” မေကဗျာဦး
မြဝတီ၌ ထိုင်းဘတ်ငွေဈေး စံချိန်တင်ထပ်မံမြင့်တက်၊ ကုန်စုံဆိုင်များ အဝယ်ရပ်နားထားရ
ဆိုင်ကယ်စီး ဦးထုပ် စနစ်တကျ ဆောင်းစေရေးနှင့် ယာဉ်စည်းကမ်း လမ်းစည်းကမ်း ရှိစေရေး လားရှိုးမြ??